Mabasa uye mhando dzekusimudza murwere | JBH Chiremba
Mabasa uye mhando dzekusimudza murwere
Basa rekusimudza kwevakaremara varwere:
Kufambisa vanhu nekusagadzikana kwekufamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe kunogona kusimudza murwere kubva pasi kuenda pamubhedha; tsoka dzechassis dzinogona kuvhurwa kuti dzive padyo nemurwere; vhiri rekumashure rine bhureki rinogona kuvharira kudzivirira kusimudza murwere kana murwere achinge asimudzwa Fambisa uye zvinokonzeresa kukuvara kusingatsanangurike kune vanamukoti kana varwere. Rin'i yekusimudza inogona kutenderedzwa 360 °, iyo inogona nyore kutamisa murwere kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe. Chipfuramabwe chakakosha chinogona kugadzirisa chimiro, uye kutwasuka kwemavara akasiyana siyana muzvikamu zvakaringana kuti mushandisi agadzirise chimiro. Iyo yekumira yekumira basa inogona kushandiswa kucheka simba panguva yakakosha kuchengetedza kuchengetedzeka kwevashandisi uye nhengo dzemhuri. Inogona kuve nyore uye nekukurumidza kukatanurwa uye kupetwa kuitira nyore kutakura.
Pedestal mhando mafoni anosimudza anowanzo shandiswa mune zvehunyanzvi masangano kana zvipatara. Ivo anoshandiswa kufambisa zvinhu zvakaita semacheya uye machira panogara chinhu chinofamba kana kurara panosimudzwa.
Kukwidziridzwa kwekukwira masitepisi kunoshandiswa kubatsira vanhu vasingakwanise kukwira nekudzika masitepisi, asi chinhu chinofamba choga hachigone kuitwa zvakazvimiririra. Mumwe munhu anofanira kubatsira kuve nechokwadi chekuchengeteka.
Makwenzi akasimudzwa anowanzoiswa pasi padivi pemubhedha, uye kune zvakare mbiru dzakaiswa pamakona mana emba, dzakashongedzwa nezvipfigiso zvinoita kuti zvinhu zvinofamba zvifambe mukati mekutenderera kwenzira.
Kukwirisa-njanji kusimudzira kunofambisa chinhu chinofamba kuenda kune chakanangwa nechipfuramabwe pamwe nechitima chakaiswa padenga. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti kuiswa kwetiraki kunoda kuvaka, uye kana yaiswa chete, chinzvimbo chetraki hachigone kuchinjwa, uye mari yacho yakakura, saka inoda kunyatsosarudzwa.
Chipfuramabwe chikamu chakakosha chekusimudza kwemagetsi. Inogona kuve yakakamurwa kuita chipfuramabwe mhando, yakaputirwa mhando, yakatsemurwa gumbo mhando (yakazara-yakaputirwa, semi-yakaputirwa), chimbuzi mhando, nezvimwewo, uye kunyangwe chigaro chemhando (yekugezera chair mhando, chigaro mhando) Uye zvimwe zvakakosha zvirevo.
Vakwegura vanorwara zvakaipisisa, vakaremara mitezo, vasina chavanoziva kana vasingakwanise kuita zviitiko zvevakwegura, vangave vakarara pamba, mumusha unochengeterwa vakwegura, kana muchipatara, kuchengetwa kwekugezesa, kuchengetedza tsvina, uye hupenyu hupenyu idambudziko rakakosha. Kune ava varwere kana vakwegura, ganda remuviri wese rinongogona kucheneswa nekukorobha. Muchengeti ari muchipatara kana hama kumba anogona kubata bheseni kana bhakiti remvura inodziya, kuinyorovesa netauro, vozokwesha. Nekuti hazvipindure kushandisa zvimidziviriro senge sipo uye kushambidza muviri panguva yekukaseta, kukwenya kuri kure nekuva kwakachena uye kwakakwana. Kunyanya kune iyo urethral orifice uye anus, iyo hutsanana yekukorobha ishoma kwazvo. Kunzwa kwekukorobha kwakanyanya zvakanyanya kupfuura kusuka. Neraki, ava varwere kana vakweguru havachagone kuratidza manzwiro avo. Kune ava varwere kana vakwegura vanorara pamubhedha kwenguva refu uye vasingakwanise kuzvitarisira, hazvina kuipa kuti mumwe munhu abatsire kukwesha nguva dzose. . Naizvozvo, varwere ava kana vakweguru vanogara vachitakura hwema husingafadzi, kuitika kwehutachiona hwehutachiona nemabhedha zvakanyanyisa, uye hupenyu hwehupenyu hwakadzika kwazvo.
Rudzi urwu rwekusimudza runogona kushandiswa mune mbiri dzimba uye zvokurapa masangano. Mushure mokunge R & D uye kugadzirwa kwaiswa musika, zvinokwezva kutariswa nekucherechedzwa kwevanhu vese, nekuti kusimudza kunogadzirisa dambudziko hombe revanamukoti vanorara pamubhedha, iro rinofarirwa nevarwere vakwegura nevanamukoti. Nekubatsira kwerudzi urwu rwekusimudza, vakweguru kana varwere vanogona kugeza zuva rega rega, vachideredza ganda uye hutachiona hwehutachiona hwevarwere nevakwegura, zvichibvisa kunhuwirira kunoshamisa pamuviri. Kunyangwe iwe ukagara pamubhedha kwenguva refu, unogona kuenderera nekunakidzwa nekunakirwa kwekugezesa. Chengetedza muviri wese wakachena uye wakaoma, uchivandudza zvakanyanya hupenyu hwevakweguru nevarwere vane zvisingaite zviitiko.
zvakazara muchipatara mubhedha, simba mubhedha wechipatara, kurapa kuraswa, kumeso muromo mask, recliner mubhedha wevarwere, mabhedha ekuchengetedza zvakanyanya,
Anhui JBH Chiremba Zvishandiso Co., LTD
Mhando dzemibhedha yemuchipatara
Mubhedha wechipatara unowanzoreva mubhedha wevacheche, uyo unogadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemurwere uye tsika dzakazara mubhedha, uye yakagadzirirwa nenhengo dzemhuri kukomoka ...
Basa rekusimudza kwevarwere vakaoma mitezo: Kufambisa vanhu nekufamba kusinganakidze kubva panzvimbo imwe kuenda pane imwe kunogona kusimudza murwere kubva pasi kuenda pamubhedha; tsoka dzekisesi dzinogona kuvhurwa ...
Kupatsanura uye zviyero zvemask
Disposable Medical Mask: Disposable medical mask: Iyo inokodzera dziviriro yehutsanana munzvimbo yakajairika yekurapa uko pasina njodzi yemvura yemuviri uye kuputika, yakakodzera gen ...
kurapa kuraswa, zvakazara muchipatara mubhedha, kumeso muromo mask, simba mubhedha wechipatara, mabhedha ekuchengetedza zvakanyanya, recliner mubhedha wevarwere,